Ukuthengisa kweHoax? Iibhodi zebhodi yeIvar's Undersea | Martech Zone
Ngokuka-YouTube, iiyure ezingama-72 zevidiyo zilayishwa yonke imizuzu! Abasebenzisi be-Twitter nge-tweet Amaxesha angama-400 ezigidi ngosuku. Kwilizwe eligcwele ingxolo, kunzima ukuba imveliso, iwebhusayithi, okanye inkonzo iviwe. Kunzima ngakumbi xa kungekho nto ikhethekileyo ngokwenyani malunga nentengiso. Yonke imihla, abathengisi bajongana nomceli mngeni wokunyuka ngaphezulu kwengxolo. Ngethemba lokuvuselelwa kokuyila, ndibuyela ku-2009 kunye nebhodi yebhodi yebhodi engaphantsi kolwandle eyenziwe Ikhonkco lokutya kwaselwandle likaIvar eSeattle, eWashington.
Imbali kaIvar yeNtengiso yoBuchule
Ivar yasungulwa ngu-Ivar Haglund, imvumi yase Seattle eyakha i-aquarium yokuqala yesixeko. Indawo yokutyela yasekwa kuba uIvar wayecinga ukuba kuya kuba bubulumko ukondla iindwendwe zeentlanzi zaselwandle. Wanika iindawo zakhe zokutyela izitayile ezingaqhelekanga, efanekisela enye yeendawo zakhe emva kwendlu ende yaseIndiya. Kumashumi eminyaka, wayexhasa indawo yomlilo yasekuhlaleni enomtsalane, etsala ngaphezulu kwama-300,000 abantu rhoqo ehlotyeni. Kule ndawo, uIvar Haglund wayeyintsomi.
Iibhodi ezingaphantsi kwamanzi
U-Ivar waqala iphulo lebhodibhodi engaphantsi kwamanzi ngokubhengeza ukufunyanwa kwamaxwebhu ukusuka kwiminyaka ye-1950 enikezela ngemephu kwiibhodi zeebhodi ezazisungulwe ngumseki werestyu kwiPuget Sound. Ngokufanelekileyo, uHaglund wayecinga ngekamva apho abathengi babeza kuqhuba iinqanawa zangaphantsi kwamanzi kwaye wabeka iibhodi zezandi kwiSandi ukufumana umda kwintengiso kule nkqubela-phambili yokuqhuba abantu. Emva koko, zaqhekeka iindaba zokuba oomatiloshe babuyise enye yezi ntengiso ziyinyani ezivela ezantsi kwePuget Sound. Ibhodi yebhodi efumanekileyo yabhengeza isitya se-clam chowder ngeesenti ezingama-75 kwaye yayihonjiswe ngepeyinti enezinto ezinobuncwane. Ezinye iibhilibhodi ziye zafunyanwa.
Ukuba imeko yeebhilibhodi ibingonelanga ukuqinisekisa ubunyani bayo, omnye wababhali-mbali abahlonitshwayo bendawo yaseSeattle uye phambili ukuqinisekisa iziphumo. UPaul Dorpat, umbhali-mbali wase Washington State kunye nomlobi wamaphephandaba owaziwayo esixekweni, wongeze igama lakhe kulo mxube ngokunika ingxelo eqinisekisa ukuba amaxwebhu ayinyani. Uluvo lwakhe oluthembekileyo, kudityaniswa nokutyala okucwangciswe ngononophelo kunye nokufumanisa iibhodi zebhodi efihliweyo zamanzi, kwakwanele ukweyisela uluntu ukuba iibhilibhodi ziyinyani. Ukukhumbula ukufunyanwa, i-Ivar yehlise ixabiso le-clam chowder yayo ukuya kwiisenti ezingama-75 kwisitya ngasinye - ixabiso elifanayo eliboniswe kwintengiso.
Ivar yenzelwe ukugcina ubuqhetseba buqhubeka de kube kugqityiwe ukupapashwa kwentengiso, kodwa amavili aqala ukuphuma emva kokuba iphulo lifumene isaziso sokupapashwa kwendawo yokutyela. Xa ebuzwa ukuba aphawule ngebali, uDonegan uvumile ukuba ukufunyanwa bekuyi umkhankaso wentengiso wentsholongwane egazini othathe kancinci kancinci kunokuba bekulindelwe. Emva kolu lwamkelo, amanye amalungu oluntu aqala ukugxeka abaphathi benkampani u-Ivar ngokutyala iibhodi zezaziso kunye nokukhohlisa uluntu. UPaul Dorpat, umbhali-mbali wase Washington State naye wafumana ubushushu eluntwini ngokudlala kunye ne stunt.
Indlela iStunt eyichaphazele ngayo iNgcaciso yeNkampani
Ngaphandle komzuzwana Ukupapashwa kakubi, Eli phulo lokuthengisa liyimpumelelo! Ngexesha lephulo lebhodibhodi, intengiso ye-Ivar's clam chowder inyuke nge kwi-400 ipesenti, Ukutsiba ngaphezulu kwe-60,000 yokuthengisa xa kuthelekiswa nonyaka ophelileyo. Njengoko kungqinwa kweli nqaku, abantu bayalikhumbula eli phulo lokuthengisa kunye nokuthetha ngalo. Ukukhangela kuGoogle Iibhodi zebhodi yebhodi engaphantsi kwe-Ivar ibuyisa ngaphezulu kweziphumo ezingama-360,000.
Ngokucacileyo, ukucwangciswa okuhle kunye nokuphunyezwa kwenze ukuba iibhodi zebhodi ezingaphantsi kolwandle ze-Ivar ziphumelele. Oku kulandelayo zizinto eziphambili zokuthatha oza kucinga ngazo ::
Kwakukho izinto zakudala ezazivumela iifoto kunye neevidiyo ukuba zifakwe njengoko izinto ezibonakalayo zazifunyanwa.
Ibali laxhaswa ngumlando-mlando othembekileyo.
Inkampani yayilungiselelwe kwaye yenziwa imali kwintengiso yasimahla ngokuchitha imali ithengisa ibali eliphambeneyo kunye nexabiso le-clam chowder.
Ibali lalingaqhelekanga kodwa likholeleka kwaye labamba ingqalelo yabantu kunye nokucinga.
Njengoko ubona, iqela laseIvar laya ngaphezulu nangaphaya kwesiqhelo. Ukuba uza kuphumelela, kuya kufuneka uzimisele ukwenza into abanye abangathandi ukuyenza. Yenza into ekumgangatho ophezulu engenangqondo. Ubugcisa bebali elihlekisayo nelinokukholeleka. Sukulungela imeko yangoku. Ekuthengiseni, ukhilimu unyuka uye phezulu.
tags: Ibhodi yebhodiubuxoki obenziwe ngamasibomuIntengiso yobuxokiIindlovuIivars zebhodi yebhodiIivars chowder
UMateyu Schmoldt ubenguMarketer kwi-Intanethi ukusukela ngo-2009. Ungumsunguli we ohthethingsyoucanbuy.com, indawo apho enza isingqisho malunga neemveliso ezimangalisayo.